Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Abdul Zakir
Abdul Rauf Zakir, sidoo kale loo yaqaano Qari Zakir, waa hoggaanka howlaha isoo biimayska ee Shabakada Haqqani sidoo kale waa taliyaha howlfulinta ee Kabul, Takhar, Kunduz iyo Gobollada Baghlan, Zakir wuxuu mas’uul ka yahay barnaamijka tababarka ee Shabakada Haqqani, kuwaasoo ay ku jiraan tababarka hubka yar, hubka cul-culus, iyo barashada miiniiyinka macmalka ah (IED) ee aassaasiga.
Zakir wuxuu uyimid madaxa Shabakada Haqqani Network oo ah Sirajuddin Haqqani sannadkii 2008, isagoo ka dalbaday gargaar maaliyaddeed isagoo ku badalanaya in kooxda ay balaarinayso raad ku yeeshada iyo howlaha ay ka wadaan Galbeedka Afghanistan, oo wuxuu noqday saaxiib la aammini karo oo Sirajuddin aad ugu soo dhow. Wuxuu lug ku la’haa weeraro isoo biimays oo dhowr ah oo caan ku ahaan Shabakada Haqqani Network oo wuxuu qeyb mas’uul ku leeyahay inuu iska la’haa go’aannadii kama dambayska ee ha noqoto ama yaysan noqon in la howlgeiyo weeraro baaxad leh oo ay qorsheeyeen hoggaamiyayaasha heer-degmo ee maxalliga. Weeraro loo isticmaalay shaqsiyaad laga soo xushay barnaamijka Zakir oo ay ka mid yihiin weeraradii 2010 oo lagu qaaday saldhigyada xoogga isbaheysiga ee Salerno iyo Chapman; weerarloo bishii Juun 2011 ee ka dhacay Hoteelka Intercontinental Hotel, kaasoo dilay 11 oo ah dad shacab ah iyo laba qof oo ah baliiska Afghan; iyo bishii Seteember 2011 weerarkii lagu qaaday Safaaradda Mareykanka ee Kabul, kaasoo ay ku dhinteen 16 qof oo Afghans ah, oo ay ku jireen ugu yaraan lix carruur.
Waaxda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka waxay Sirajuddin Haqqani u magacawday inuu yahay Argaggixiso Gaar ah oo Caalami ah sida hoos timaada Amarka Go’aal meel-marinta ee 13224 ee soo baxay 5 bisha November, 2012.
Shabakada Haqqani Network waa koox miliishiya ah oo uu aassaasay Jalaluddin Haqqani, waa hoggaamiye goobta dagaalka ee Afghanistan laga soo bilaabo 1980 yadii markaas oo uu la dagaalay Midowga Soofiyeetka. Shabakada Haqqani Network waxay isbahaysi la yihiin kooxaha Talibanka Afghan iyo al-Qaida oo waxay doonayaan in Afghanistan dhexdeeda ay dib dhidibada ugu taagaan qaanuunkii Taliban. Shabakada Haqqani Network salkoodu koowaad waa Waqooyiga Waziristan, Pakistan, oo waxay howlo ka fuliyaan xuduuda soo gasha barriga Afghanistan iyo Kabul. Kooxda Haqqanis waxaa loo tixgeliyaa in ay yihiin kooxda argagaxisada kuwooda dilaaga ah oo bartilmaameedsada xooggaga Isbaheysiga xooggaga Afghan ee jooga Afghanistan.
Shabakada Haqqani Network waxay qorsheeyeen oo ay fuliyeen dhowr afduub oo xaddi badan iyo weeraro lagu qaaday Xooggaga Isbaheysiga iyo Mareykanka ee jooga Afghanistan, iyo sidoo kale dowladda Afghan iyo bartilmaameedyo dhanka shacibka. Qaar ka mid ah weeraradii ugu darnaa ee ay kooxda fuliso waxaa ka mid ahaa weerarkii lagu qaaday Hoteelka Intercontinental Hotel ee Kabul dhexdeeda bishii Juun 2011, kaasoo lagu dilay 11 shacab iyo laba baliis Afghan ah; bishii September 2011, gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo ka dhacay Gobolka Wardak, Afghanistan, kaasoo dhaabacay 77 oo askarta Mareykanka; weerar socday 19 saacadood oo ka dhacay Safaaradda Mareykanka iyo Xoogga Gargaarka Ammaanka ee Caalamiga (ISAF) xaruntooda ku taalla Kabul ee bisha Seteember 2011; bishii Juun 2012 weerar isoo biimayay bambaano oo lagu soo qaaday Saldhigga Howlgelinta Horeyhorey ee Salerno, halkaasoo ay ku geeriyoodeen laba ka mid ah askarta Mareykanka oo ayna ku dhaawacmeen in ka bada 100; iyo weerar qaatay 12 saacaadood oo ka dhacay hoteelka Spozhmai Hotel ee Kabul ku yaalla bishii Juun 201, kaasoo dhaliyay in ay ku geeriyoodaan ugu yaraan 18 Afghani ah, oo uu ku jiraan 14 shacab.
Waaxda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka waxay 19 bishii Seteember, 2012 ay Shabakada Haqqani Network u magacaawday in ay yihiin Urur Argaggixiso Shisheeye.
Taariikhda Dhalashada: Inta udhaxeysay 1969 iyo 1971
Goobta Dhalashada: Kabul, Afghanistan
Magacyada La Sheegto: Qari Zakir